Ipulasitiki Injection Molding nge-Induction Heating Machine
Plastic Inaliti udini nge Ukushisa ukufakelwa kudinga ukushisa kwangaphambi kokushisa kwesikhunta kushise kakhulu, ukuqinisekisa ukuhamba kahle noma ukwelashwa kwento ebunjiwe ngomjovo. Izindlela ezijwayelekile zokushisa ezisetshenziswa embonini ukushisa okushisa noma okuphikisayo, kepha ziyadida, azisebenzi kahle futhi azithembekile. Ukushisa kwe-Induction kuyindlela ehlanzekile, esheshayo futhi eyonga amandla esetshenziswe kabanzi eminyakeni yamuva ukubuyisela umusi, igesi noma ukushisa okuphikisayo kwesikhunta futhi kufe.
Kuyini Injection Molding?
Ukubumba ngomjovo wepulasitiki ngokushisa kokungeniswa kuyinqubo yokuncibilikisa amaphilisi epulasitiki (ama-polymers e-thermosetting / thermoplastic) okuthi uma esethambile ngokwanele, ajovwe ngomfutho embotsheni yesikhunta, egcwalisa futhi iqinise ukukhiqiza umkhiqizo wokugcina.
Ingabe Ipulasitiki Injection Molding Umsebenzi?
Inqubo yokubumba umjovo wepulasitiki eProtolabs inqubo ejwayelekile efaka isikhunta se-aluminium. I-Aluminium idlulisa ukushisa ngokuyimpumelelo kunensimbi, ngakho-ke ayidingi iziteshi zokupholisa - okusho ukuthi isikhathi esisigcina ekupholiseni singasetshenziswa ekuqapheleni ingcindezi yokugcwalisa, ukukhathazeka kwezimonyo kanye nokukhiqiza ingxenye esezingeni.
Ama-pellets ama-resin alayishwa emgqonyeni lapho ekugcineni ezoncibilika khona, acindezelwe, bese ejojelwa ohlelweni lomgijimi wesikhunta. I-resin eshisayo idutshulwa emgodini wesikhunta ngamasango bese ingxenye ibunjwa. Izikhonkwane ze-Ejector zenza lula ukususwa kwengxenye kusikhunta lapho iwela emgqonyeni wokulayisha. Lapho ukugijima sekuqedile, izingxenye (noma isampula yokuqala yokusebenza) zifakwa ebhokisini bese zithunyelwa kungekudala ngemuva kwalokho.
Ukushisa kwe-Induction kusetshenziswa kanjani ku-Dies & Molds Industry?
Induction Ukushisa kwamathuluzi nokubunjwa komjovo wepulasitiki
Ukushisisa amathuluzi okubumba okuphulukisa umkhiqizo wenjoloba namathayi ezimoto
Ukushisa kwe-induction kwe-catheter tipping kanye nemikhiqizo yezokwelapha
Ukushisa kwe-die ne-platen kokunyathela nokwakha insimbi
Induction Ukushisa kabusha isikhunta sokuphonsa embonini yokukhipha insimbi
I-Induction Heat ekwelapheni nokwenza lukhuni kwamathuluzi okushaya isitampu nokushaya bese iyafa
Izigaba Induction Ukushisa PDF, Ubuchwepheshe Amathegi IH Plastic Inaliti Ukubumba, ukufakwa kwe-injection induction, lokungeniswa Injection Molding, i-induction injection heater yokubumba, lokungeniswa Plastic Injection Molding, Ukujova Ukujova, Plastain Injection Molding, Plastain Injection Molding, Plastic Injection Molding Heater, Umshini Wokufakelwa Kwamapulasitiki Eplastiki, Plastic Injection Molding Uhlelo, Kuyini Injection Molding Imeyili kwemikhumbi